Ekpebiela m iso onye mbipụta na-ebuso nri m agha ma na-ahapụ ọdịnaya m n'okpuru aha ya na weebụsaịtị. Ọ na-agba mgbasa ozi ma na-enweta ego site na ọdịnaya saịtị m ike gwụrụ m. Ndị nkwusa, gụnyere ndị na-ede blọgụ, nwere ikike n'okpuru Digital Millennium Copyright Act. Kedu ihe bụ DMCA? Digital Millennium Copyright Act (DMCA) bụ iwu United States (etinyere iwu na Ọktọba 1998) nke mere ka nchedo iwu sie ike